Maxay Suuqleyda Ka Baran Kartaa Cilmi Baarista Isbadalka IT-ga ee Dell? | Martech Zone
Maxay Suuqleyda Ka Baran Kartaa Cilmi Baarista Isbadalka IT-ga ee Dell?
Thursday, April 27, 2017 Jimco, Abriil 28, 2017 Douglas Karr
Dell wuxuu qeexayaa Teknolojiyada Macluumaadka Badalka iyada oo ah habka kor loogu qaadayo macluumaadka iyo tiknoolajiyada isgaarsiinta si nolosha aadanaha looga dhigo mid waxtar leh oo wanaagsan. Is-beddelka IT-ga ayaa sidoo kale xarun u ah hagaajinta kaabayaasha dhaqaalaha si loo dhiirrigeliyo wax-ku-oolnimada nidaamyada sababtoo ah hoos u dhaca ku-tagga kheyraadka.
Waan la shaqeynayay Calaamadee Schaefer iyo macmiilkiisa, Dell Technologies, bilihii la soo dhaafay si ay u daabacaan boodhadh siiya aragti ku saabsan dadka wadaya Isbadalka IT-ga iyo sidoo kale cilmi baarista cajiibka ah ee ku xeeran dhaqdhaqaaqa. Podcast-ka ayaa loo yaqaan Nalalka.
Is-beddelka IT-da ayaa aasaas u ah fiirinta sida ugu wanaagsan ee aad u dhexgashay tikniyoolajiyadda howlahaaga ganacsi, waxa ka soo baxay isticmaalkiisa, sida ay shirkaddaadu ula qabsatay isbeddelada tikniyoolajiyadda, iyo sida ganacsigu ugu suurta galay inuu u beddelo adeegsiga macluumaad .
Isbadalka IT Furaha Qaadashada
Maaddaama ay Dell falanqeeyeen waxa isbeddelka tikniyoolajiyadda macluumaadka ay tahay, waxay weydiiyeen su'aalo taxane ah, maaddaama ay si fiican ugu habboon yihiin inay naga caawiyaan inaan ka jawaabno su'aalo muhiim ah. Intooda badan arimahan waxaa loogu talagalay shirkadaha ku tiirsan isbadalkeeda waxaana loola jeedaa inay qiimeeyaan heerka saameynta fikradan weyn ay ku leedahay guusha hay'adahaas. Su'aalahaas waxaa ka mid ah: -
Nooca tiknoolajiyada badanaa laga isticmaalo shirkaddaada
Nooca nidaam ee jira ee loo isticmaalo in lagu socodsiiyo meheraddaada
Dabeecada faahfaahinta loo adeegsaday horumarinta nidaamyadan
Iyo sida ugu wanaagsan ee farsamada macluumaadka loogu isticmaalay meheraddaada.
Sidoo kale, Dell wuxuu eegay faa iidooyinka laga yaabo in ku-beddelka IT-ga ay ku keeni lahayd ganacsigaaga tan iyo markii aad bilowday isticmaalkiisa. Halka shirkadaha badankood ay ku guuleysteen adeegsiga qaabkan, kuwa kale ma aysan awoodin inay gaaraan faa iidooyinka buuxa ee isticmaalka is-beddelka tikniyoolajiyada macluumaadka. Laga soo bilaabo sahannadii la sameeyay, waxay u muuqataa in ganacsiyada badankood ay awood u yeesheen inay aqoonsadaan IT Transformaton waxayna ku socdaan dariiqa ay ku beddelayaan.
Iftiinka Qaybta 01: Diyaar, Deji, Beddel… IT-gaaga
Heerka isbeddelka IT-ga ee shirkaddu gaartay waxay saameyn deg deg ah oo la taaban karo ku leedahay koritaanka ganacsiga, kala duwanaanshaha tartanka iyo awoodda wax-soo-saarka. Waa imisa Falanqeeyayaasha warshadaha IT-da ee hormoodka ah waxay sameeyeen baaritaanka waxayna leeyihiin jawaabo la yaab leh. Waqtiga: 34:11
Ganacsiyada ugu guulaha badan maanta waxay leeyihiin saddex sifo oo u gaar ah. Ugu horreyntii, waxay awood u yeesheen inay dhiirrigeliyaan adeegsiga tikniyoolajiyadda dhammaan howlahooda. Ta labaad, waxay la yimaadeen nidaam u gaar ah oo awood badan u leh adeegsiga teknolojiyadda macluumaadka sida ugu habboon. Maaddaama isbeddelka IT-ga loola jeedo in lagu xoojiyo wax soo saarka ganacsiga, shirkadaha adeegsada fikraddan ayaa leh
Maaddaama isbeddelka IT-da loola jeedo in kor loogu qaado wax soo saarka ganacsiga, shirkadaha adeegsada fikraddan waxay barteen inay la jaanqaadaan daruuraha internetka si loo kordhiyo wax soo saarka. Ugu dambeyntiina, shirkadaha guuleysta waxay awood u yeesheen inay abuuraan nidaam teknolojiyad macluumaad ah oo si fudud loo hawlgeli karo isla markaana soo dhaweynaysa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya hay'addaas. Ganacsiyada si buuxda loo beddelay waxay dhiirrigeliyaan isgaarsiin wanaagsan oo ka gudubta heerarka kala duwan ee maamulka shirkaddaas gaarka ah.
Xawaaruhu Ma Furaha Furaha Ayuu U Yahay Isbedelka Dijital Ah?
Haa. Inta badan ganacsiyada maanta waxay qaataan isbeddelka tikniyoolajiyada macluumaadka si markaa ay ugu fiicnaadaan horumarinta alaabada iyo adeegyada cusub ka hor tartamayaashooda. Shirkadaha ugu guulaha badan maanta waxay awoodeen inay ku dhisaan codsiyo xoog leh maalmo un gudahood, barnaamijyo aad u xasiloon oo ay dhif iyo naadir ku yihiin dhibaatooyinka dayactirka.
Is-beddelka IT-ga ayaa gacan ka geystay kobcinta wax soo saarka hay'adaha badankood. Ujeeddadaas, ganacsiyada adeegsanaya teknolojiyadda waxay awood u leeyihiin inay ku fuliyaan mashaariicdooda si hufnaan weyn leh isla markaana u gaarsiiyaan waxsoosaar ka hor jadwalka. Sidaa awgeed, isbeddelka IT-ga ayaa ah duco ku qarsoon shirkado badan.
Laga soo bilaabo bilowgii, waxaa muuqata ku filan in isbeddelka IT-ga uu lagama maarmaan u yahay guusha ganacsigaaga. Si kastaba ha noqotee, kahor intaadan dooran inaad adeegsato hal-abuurnimada noocaas ah, waa inaad marka hore sameysaa xoogaa baari naf ah si aad ula timaado sabab asal ah sababta aad u aamminsan tahay in is-beddelka tikniyoolajiyadda macluumaadka uu faa'iido badan u keenayo shirkaddaada.
Maalgashi xoog leh ku samee hal-abuurnimada si aad u awood u yeelato inaad abuurto ganacsi xoog leh, oo aad awood ugu leh inaad la tartanto ganacsiyada kale ee noocaaga ah. Waxaa laga yaabaa inaad ku bilawdo wax yar, laakiin haddii aad ku socoto wadada saxda ah, hubaal waxaad ku dambayn doontaa inaad noqoto shirkad lagu xisaabtamo.
Maxay suuqyadu ka baran karaan Is-beddelka IT-ga?
Suuqyayaashu waa inay isla markiiba maalgashadaan tikniyoolajiyadda suuq geynta taas oo yareyneysa waqtiga iyo lacagta, iyadoo la kordhinayo qiimaha shaqada la qabtay. Tani waxay bixin doontaa guulo laga gaaro faa'iidada taas oo kordhin doonta saameynta suuqgeyntaada iyadoo yareyneysa waqtiga lagu qaatay fulintiisa. Kaydintaasi waxay markaa aasaas u noqon kartaa maalgashiga suuqgeynta oo ganacsigaaga beddeli doona.
Kusoo Biir Nalalka iTunes, Spotify, ama iyada oo loo marayo Quudinta Podcast.
Tags: Dellmacluumaadka tiknoolajiyaddaitisbadalwaa maxay isbadal